Olee otú Ọkụ DVD on Mac El Capitan
Na ole na ole ọganihu na a nta mgbanwe ke interface, ọtụtụ ọrụ nwere ike ịhụ n'ịrụ ụfọdụ ihe aga-eme a bit ịma aka na-eji Mac OS X El Capitan. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ego na a Mac kọmputa nwere ndị ka n'otu ọnọdụ dị ka iso, ihe nwere ike ka na-esi mgbagwoju anya mgbe ụfọdụ, karịsịa mgbe ị na ọhụrụ na sistemụ.
Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị bụ ihe ọhụrụ nye Mac n'elu ikpo okwu (OS X El Capitan na nke a ngosipụta), ọ pụrụ isiri gị ike ọkụ a DVD.
Ebe ị ga-amụta ihe kacha ụzọ iji na-enweta ọrụ mere eji ihe kensinammuo interface nke a-atọ ndị ọzọ omume aha ya bụ Video Converter Ultimate mepụtara Wondershare.
Download Links ka Wondershare Video Converter Ultimate
Wondershare Video Converter Ultimate Dị maka ma Mac na Windows kọmputa na nwere ike ibudata site ya ukara website. Links ibudata Wondershare Video Converter Ultimate n'ihi na ma nyiwe na-nyere n'okpuru:
Dị ka aha na-atụ aro, na mgbakwunye na-enyere gị aka ọkụ a DVD na ala, Wondershare Video Converter Ultimate awade ọtụtụ ndị ọzọ isi atụmatụ gụnyere:
• Complete Video Nchigharị - The omume bụ ike nke na converting gị video faịlụ site na otu usoro ọzọ. Ngwa-akwado ọtụtụ faịlụ formats na e nwere ihe fọrọ nke nta ihe ọ bụla ọ na-apụghị n'ọgba.
• Complete Audio Nchigharị - Wondershare Video Converter Ultimate-enyekwara gị tọghata ọdịyo faịlụ site na otu usoro ọzọ.
• Nchigharị ụdịdị na Quality - ezie converting ọdịyo ma ọ bụ video faịlụ, usoro ihe omume-enye gị ohere bulie mmepụta mma. Nke a na-enyere gị jikwaa na ịnọgide na-enwe kwesịrị ekwesị itule n'etiti audio / video mmepụta àgwà na size nke converted faịlụ.
• Ngwaọrụ Specific Nchigharị - Na Wondershare Video Converter Ultimate, ị nwekwara ike bulie lekwasịrị ngwaọrụ ebe i bu n'obi na-egwu converted video ma ọ bụ ọdịyo faịlụ.
• Bulite - The software enyere ị na-egwu ọkacha mmasị gị fim, TV na-egosi, music faịlụ, ma ọ bụ n'ụlọ videos nri gị TV. Nke a nwere ike na-arụzu site Ịdọrọ na idobe faịlụ n'ime Media Server interface nke usoro ihe omume. Baghị uru banyere, gị Mac kọmputa ga-ejikọrịrị gị TV site ọ bụla media iji na-eji nke a mma.
• Download - Na nke a bọtịnụ - na ga-arụnyere iche iche, ị nwere ike ibudata ọkacha mmasị gị media faịlụ site na Internet.
Iji Wondershare Video Converter Ultimate Ọkụ a DVD
1. Jiri njikọ nyere n'elu ibudata na ịwụnye Wondershare Video Converter Ultimate na gị Mac kọmputa na-agba ọsọ OS X El Capitan.
2. Mwepụta usoro ihe omume.
3. Fanye a ide DVD na DVD edemede.
4. Site n'elu nke interface, pịa apa ọkụ bọtịnụ.
5. ịdọrọ chọrọ media faịlụ n'ime n'etiti ngalaba nke Ọkụ interface.
6. Site n'elu nke media akpa, jide n'aka na apa ọkụ nhọrọ họrọ na Task dobe-ala ndepụta.
7. Ke aha ubi, pịnye a aha ọhụrụ maka DVD na ị chọrọ ka ọkụ.
8. Site apa ọkụ iji dobe-ala ndepụta, ịhọrọ DVD dere na e dere ihe ide DVD.
9. Optionally, họrọ gị họọrọ menu isiokwu si ala ngalaba nke media akpa.
10. Site n'okpuru NchNhr Theme ngalaba, pịa iji họrọ bọtịnụ redio na-anọchite anya gị họọrọ akụkụ ruru maka mgbasa ozi na a ga-ọkụ na-DVD.
11. Site na ala nke interface, pịa DVD ụdị si dị ndọpụta ndepụta.
12. Site Ogo ndọpụta ndepụta, họrọ gị họọrọ mmepụta àgwà nke mgbasa ozi faịlụ na a ga-ọkụ na-DVD.
13. Pịa Ọkụ button na ala-nri akuku nke Wondershare Video Converter Ultimate si interface na-amalite na-ere ọkụ usoro.
Na mgbakwunye na-ere ọkụ na mgbasa ozi faịlụ ozugbo a ide DVD, Wondershare Video Converter Ultimate for Mac-enye gị ohere ike .dvdmedia ma ọ bụ .ISO faịlụ. Ị nwere ike iji ndị a faịlụ iji nwalee ikpeazụ pụta nke DVD tupu media faịlụ na-ọkụ ya.
Gịnị mere I Kwesịrị Ịhọrọ Wondershare Video Converter Ultimate for Mac OS X El Capitan?
E nwere ọtụtụ ihe maka buru Wondershare Video Converter Ultimate. A ole na ole nke ha bụ:
• Ihe omume ahụ nwere a mfe ma dị mfe na-eji interface.
• Ọ bụ ike nke na converting ọ bụla video ma ọ bụ ọdịyo faịlụ ka ọ bụla video ma ọ bụ ọdịyo faịlụ Ọkpụkpọ nke gị nhọrọ.
• Ọ na-akwado nnukwu akakabarede nke mgbasa ozi faịlụ.
• Na Wondershare Video Converter Ultimate, ị nwere ike họrọ akakabarede mmepụta na ndabere nke lekwasịrị ngwaọrụ na nke ị chọrọ iji converted media.
• Ihe omume ahụ nwere a wuru na-DVD ọkụ ngwá ọrụ na-enyere gị ike media DVD enweghị dabere na ihe ọ bụla ọzọ-atọ ndị ọzọ software.
• Wondershare Video Converter Ultimate-enye gị ohere ịzọpụta media DVD na .ISO faịlụ Ọkpụkpọ na ike ga-eji nwalee ikpeazụ mmepụta nke DVD tupu na-ere ọkụ ya na ka a na-ahụ diski. Dị otú ahụ .ISO faịlụ nwekwara ike ndokwasa na mebere draịva na ike ga-eji na kọmputa na-agba ọsọ sistem si dị iche iche nyiwe, n'ihi na ihe atụ Windows.
nweta ihe niile n'okpuru otu ụlọ mgbe eji Video Converter Ultimate na gị Mac OS X El Capitan.
Undelete Ndi ana-akpo si gam akporo ekwentị mkpanaaka na
Olee otú naghachi faịlụ site SmartMedia Kaadị
Olee otú iji weghachite ehichapụ Pictures si Micro SD Kaadị
> Resource> Naghachi> Olee Ọkụ DVD on Mac El Capitan